Posted by blackroze at Thursday, February 09, 2012
ချစ်စံအိမ် on 10 February 2012 at 00:40 said...
စိတ်လျှော့ ဒို့ မရေ..ကလေးကို အလျှော့ပေးလိုက် သူပြောတာမမှာဘူး သူလည်းေ၇ာင်းချင်တာပေါ့ လူကြီးဆိုတာ စိတ်ရှည်ရတယ်းးဒန်ဒန်းဒံ
ညီရဲ on 10 February 2012 at 02:29 said...
ဟုတ်တယ် ဒါလဲ အမှတ်တရနေ့ စွဲလေးပါဘဲ သူငယ်ချင်းရေ... ခုလို ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို နှောင့်ယှက်သလို ဖြစ်လာရင် ဒီလိုဘဲ ပေါက်ကွဲတတ်ကြပါတယ်... အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ သူငယ်ချင်းရေ...
မေမြို့မိုး on 10 February 2012 at 02:43 said...
အစ်မရေ. ကျွန်တော့်မေမေကလည်း အရင်တုန်းက နှစ်ချောင်းထိုး နဲ့ကျွန်တော့်
Aung Htut on 10 February 2012 at 07:45 said...
သြော်... အေးဂျင့်ကြီးကလည်း စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့... တစ်ခါတစ်လေတော့ အခန့်မသင့်တာ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဟွား ဟွား ဟွား ဟွား.... အေးဂျင့်ကြီး ပစ်ပစ်ကို ဒီလို လုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ ဆို ခါးထောက်ရယ်ပြီး ထွက်လာခဲ့ရမှာ :)
mstint on 10 February 2012 at 09:05 said...
တီတင့်လည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ကလေးတွေနဲ့ အိမ်ဦးသခင်အတွက် နှစ်ချောင်းထိုး တစ်ချောင်းထိုး အမှတ်တရလေးတွေ ထိုးခဲ့ဘူးတယ်။ အခုတော့ မထိုးတာကြာလို့ အသေးစိတ်မှတ်မိတော့ဘူးး)
ပစ်ပစ်ရဲ့ အသစ်လွင်ဆုံး အမှတ်တရနေ့စွဲလေးဖတ်သွားတယ်နော်။
နေ၀သန် on 10 February 2012 at 10:41 said...
း).. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ အွန်လိုင်းမှာသင်ထားပြီး. .လိုချင်တဲ့ချည်ဝယ်.. ထိုးချင်တာထိုးပေါ့.. သူတို့က အဲလိုစနစ်လေးထားရင် ပြောရဆိုရတော့ခက်မယ်..
jasmine(တောင်ကြီး) on 10 February 2012 at 11:28 said...
Han Kyi on 10 February 2012 at 12:03 said...
ကွယ် ဒီတစ်ယောက်ကတော့ ဦးဟန်ကြည် ညီမလို့ ပြောစရာ မလိုအောင် ဒေါသက ငယ်ထိပ်တက်နေတော့တာပါပဲလား...ထစ်ခနဲရှိရင် ရှူးခနဲထွက်ဖို့က ရယ်ဒီ...
အဲဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ ဆွယ်တာကိုတော့ ပစ်ပစ်ရဲ့ မောင်တော်ခမျာ ဦးချပြီးမှ တရိုတသေ ၀တ်ရရှာလိမ့်မယ်ထင်ရဲ့...ရွှေပြည်ကနေ ချည်လုံးတွေ မှာစမ်းပါကွယ်...ဈေးပေါပါဘိ...ဒီမှာ ဆွယ်တာတစ်ထည်ကို မြန်မာငွေ သောင်းဂဏန်းဆို ၀တ်ပါလေ့...
နေသ၀န်ပြောသလို အွန်လိုင်းကနေ ဆွယ်တာထိုးနည်းသင်လိုက်ပေါ့လေ...လိုတရ အွန်လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံး ရှိနေမင့်ဟာ ဘာပူစရာလိုသေးလို့လဲ...
san htun on 10 February 2012 at 12:18 said...
တို့ ပစ်ပစ်လေး ဆွယ်တာထိုးချင်စိတ် ကုန်ခန်းသွားအောင် လုပ်တဲ့ ဆိုင်ရှင်ရယ်..လူဇိုး..
ဘိုဖြူ on 10 February 2012 at 20:08 said...
အတွေးတွေနဲ့ ခဏခဏရန်ဖြစ်နေတာရပ်လိုက်ပါတော့နော် စိတ်တိုတာမကောင်းဘူး
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! on 10 February 2012 at 22:45 said...
မမကတော်လိုက်တာ ညလေးဆို ဘာမှမတက်ဘူး...စက်တော့ နင်းတက်ပါရဲ့ လုံချည် ပုဆိုး ချုပ်တက်ရုံပဲ ...:P
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) on 11 February 2012 at 08:40 said...
တစ်ယောက်သောသူကို ဇွတ်မှိတ်ပြီး သည်းခံထားသမျှ အပြင်မှာ တွေ့ရာလူတွေကို ပေါက်ကွဲနေတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ၀က်မလေး။
မ..စာရေးအားကောင်းသလို တင်ပြရေးဖွဲ့ ပုံလည်းအရမ်းကောင်းတယ်..
မဒမ်ကိုး on 14 February 2012 at 12:13 said...
အေး ငါ့သမီးလေးရေ လင့်မတက်ဘူး ခုမှလာကြည့်မှတွေ့တာ၇ယ်း((
အုန်းလွဲနေတာလားလက်ပြင်ငုတ်နေတာလားမသိဘူး ၅ ရက်ကျော်ဘီ အရေးထဲခရီးကပြန်လာတော့ဖျားနေသေးတယ်လေ ..
စီဘောက်မှာလာအော်မှ လင့်ကိုပြေးကြည့်ရတယ် အဖြစ်ကတော့အေ ..
ိစိတ်လျော့စိတ်လျော့ ချည်ထိုးတတ်တာတော့ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် ဇက်ကျောသိပ်တက်တယ် အစက မားမားလဲ တစ်ချောင်းထိုးတေဘယ်မတ်တွေထိုးတယ် ခုတော့မထိုးတော့ဘူး စွန့်လွှတ်လိုက်ဘီ . မျက်လုံးမခံနိုင်လို့ .တစ်ချောင်းထိုးဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ် ဂျိုင်းကိုစားတဲ့ပုံကလွယ်တယ် လူနဲ့တိုင်းယုံဘဲလေ ..
မေးဖျက်တဲ့အထဲမှာလိပ်စာပါပါသွားတယ် ပြန်ပို့ပေးပါ ကိစ္စရှိလို့
Yin Sue on 10 March 2012 at 15:30 said...
စိတ်လျော့....တယ်ရင်း....ဒီလိုဘဲ လူတွေက ကိုယ့်ဘက်ဘဲ ကိုယ်တွေးတတ်ကြတယ်......ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးစွန့်လိုက်ရတာတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး တယ်ရင်းရယ်........